အိမ်ခြံမြေဆိုက် - ၀ ယ်ရန်အိမ်၊ တိုက်ခန်း၊ မြေ၊
ရောင်းရန်ရှိသော Central Jakarta Apartments
အရှေ့ဂျာကာတာတိုက်ခန်းရောင်း ၀ ယ်ခြင်း
တိုက်ခန်းရောင်းမည် Tangerang Selatan
လုံးချင်းအိမ် Bogor ရောင်းမည်
အိမ်ရောင်းရန် Jakarta Barat
အိမ်တလုံးရောင်းမည် Tangerang Selatan
North Jakarta တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်
တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Tangerang Selatan
Pontianak Shophouse ကိုငှားပါ
/ WA 081949322771 ကိုခေါ်ပါ
မြေအကျယ်အ ၀ န်း ၁၂၀၀ မီတာရှိသည်
အဆောက်အ ဦး 800ရိယာ2mXNUMX
/ WA 081703031339 ကိုခေါ်ပါ
တိုက်ခန်း၊ နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊
တိုက်ခန်းရောင်းမည်, တိုက်ခန်းရောင်းမည် Ciputra World ၂ ဂျကာတာ, တောင်ပိုင်းဂျကာတာရှိတိုက်ခန်းများရောင်းခြင်း
ရောင်းရန်နှင့်ငှားရန်တိုက်ခန်း Ciputra World ၂ တောင်ပိုင်းဂျကာတာ - ပရိဘောဂအသစ်စက်စက်အသစ် ၁ BR၊ ၂ BR၊ ၃ + ၁ BR
ဇန်နဝါရီလ 25, 2021 admin မှတ်ချက် Leave
တိုက်ခန်းအမည်: Ciputra World 2
မြို့ - တောင်ဂျာကာတာ
တိုက်ခန်းအကျယ်မှာ ၂၆ - ၃၂ m51 ဖြစ်သည်
အဆောက်အ ဦး များ - ၂၄ နာရီလုံခြုံရေး၊ ၂၄ နာရီ Frontdesk၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကဒ်၊ အများပြည်သူသုံးInရိယာတွင် CCTV၊ အားကစားရုံ၊ ကစားကွင်း၊ ရေကူးကန်၊ အစည်းအဝေးခန်းမ
မဟာဗျူဟာတည်နေရာပါမောက္ခareaရိယာ၌တည်ရှိသည်။ ဒေါက်တာ Satrio Kuningan တောင်ပိုင်းဂျကာတာ။
သေဆုံးသူတံခါးဝသို့ချဉ်းကပ်ရန်အနီးကပ် SemanggiSoekarno Hatta အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နှင့် Halim Perdanakusuma လေဆိပ်၊
Ciputra World Plaza ကဲ့သို့သောကြီးမားသောစျေးဝယ်စင်တာများနှင့်လည်းနီးပါသည် Semanggi, Mall သံအမတ်ကြီး, Lotte Avenue Ciputra World, Kuningan Cityအဖြစ်ကောင်းစွာ Kota Kasablanka
DBS Tower၊ Sampoerna Strategic နှင့် Standard Chartered တို့နှင့်နီးကပ်သော Tokopedia Tower နှင့်ရုံးခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်
အိပ်ခန်း ၁ ခန်း၊ အိပ်ခန်းတစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းတစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်း ၂ ခန်း၊idroom + လေ့လာရန်အခန်း၊ အိပ်ခန်း ၃ ခန်း။ ရောင်းရန်နှင့်ငှားရန်အမျိုးအစားများအားလုံးယူနစ်ရှိပါတယ်။
1 BR = $ 900 - 1,100 / တစ်လ
2 BR = $ 1200 - $ 1,900 / လ
3 BR = $ 2,200 - $ 2,700 / လ
တိုက်ခန်းရောင်းမည်, Denpasar တိုက်ခန်းများရောင်း Residence Kuningan City, တောင်ပိုင်းဂျကာတာရှိတိုက်ခန်းများရောင်းခြင်း
ရောင်းရန် Denpasar တိုက်ခန်း Residence Ubud / Kintamani Tower - ၁ ဂျာကာတာတောင်ပိုင်း၊ ကူမင်းရှိပရိဘောဂတစ်လုံးတည်း
တိုက်ခန်းအမည်: Denpasar Residence
တိုက်ခန်းအကျယ်အ ၀ န်း - 49 m2
Penghuni apartemen pun akan diberikan kartu akses pribadi menuju Kuningan City ကုန်တိုက်။
ငှားရန် Office Noble House Penthouse - Premium Grad 2.000 m2 ပရိဘောဂ - ဂျကာတာတောင်ပိုင်း၊ Mega Kuningan ရှိရုံးခန်း
ရုံးအဆောက်အ ဦး အမည်: Noble House
အဆောက်အ ဦး တည်နေရာ - အမှတ် 2, Jalan Dr.Ide Anak Agung Gde Agung Kav ။ E 4.2, RT.5 / RW.2, Kuningan, Kuningan Tim ။ , Setiabudi ခရိုင်၊ တောင်ပိုင်းဂျကာတာမြို့၊ ဂျကာတာအထူးမြို့တော် ၁၂၉၅၀
တာဝါ၊ ကြမ်းပြင် / ကြည့်ရန်: ၃၉/၃၈ ထပ်
ရုံးareaရိယာ - 2.000 m2
အဆောက်အ ဦး များ - အချက်ပေးစနစ်၊ ရေပူ၊ ဘရော့ဘန်းအင်တာနက်၊ တယ်လီဖုန်း၊ လေအေးပေးစက် (ကား)၊ ကားရပ်နားရန်နေရာလုံခြုံရေး၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ၂၄ နာရီလုံခြုံရေး
Noble House သည်ဂျကာတာတောင်ပိုင်းရှိ Mega Kuningan inရိယာတွင်တည်ရှိသောငှားရမ်းခအတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောရုံးအဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ Noble House Kuningan သည်စီးပွားဖြစ်ရုံးအဆောက်အအုံဖြစ်ပြီးစတုရန်းမီတာ ၂,၀၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိသည်။
Noble House Kuningan တွင်လူသိများသောစားသောက်ဆိုင်များစွာဖြစ်သော J. Sparrow, Moonshine နှင့် Basque တို့ဖြစ်သည်။ Noble House Kuningan ကိုဟောင်ကောင်အခြေစိုက်ဗိသုကာကုမ္ပဏီ Aedas မှဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Noble House သည်ဂျကာတာတောင်ပိုင်း၊ Mega Kuningan ရှိအခြားအဆောက်အအုံများနှင့်အလွန်နီးသည်။
Noble House သည်ဂျကာတာတောင်ပိုင်း CBD ရှိ Mega Kuningan ofရိယာ၏ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည်။ Mega Kuningan သည်စီးပွားရေးနှင့်လူနေအိမ်areaရိယာအပြင်သံရုံးများ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အရက်ဆိုင်များဖြစ်သည်။ Mega Kuningan သည် Jalan Gatot Subroto (တောင်ဘက်) နှင့်မြောက်ဘက် Jalan Satrio အကြားတည်ရှိသည်။
Noble House Kuningan သည်ဘက်စုံသုံးအဆောက်အအုံရှိ Lotte Shopping Avenue ကုန်တိုက်မှ ၁၀ မိနစ်ကြာလမ်းလျှောက်နိုင်သည် Ciputra World One နဲ့ Mal Kuningan City။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်မော်တော်ယာဉ်များ၊ တက္ကစီများ၊ Transjakarta Noble House Kuningan သို့လည်းအလွယ်တကူသွားနိုင်သည်။
အငှားစျေး: နှစ်ပတ်လည်ငှား။ အချက်အလက်အတွက်ခေါ်ပါ
နှစ်စဉ်ငှားရမ်းထားသောရုံးခန်း Noble House Penthouse Mega Kuningan တောင်ပိုင်းဂျကာတာ - အရွယ်အစား 2.000 m2 ပရိဘောဂပရီမီယံအဆင့်
အဆောက်အ ဦး တည်နေရာ: Jl ။ Dr Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.4.2 No.2 Mega Kuningan, ဂျကာတာတောင်ပိုင်း။
တာဝါ၊ ကြမ်းပြင် / ကြည့်ရန်: ၃၉ ထပ်
အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ - အချက်ပေးစနစ်၊ ရေပူ၊ ဘရော့ဘန်းအင်တာနက်၊ တယ်လီဖုန်း၊ လေအေးပေးစက်၊ ကားရပ်နားရန်နေရာလုံခြုံရေး၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ၂၄ နာရီလုံခြုံရေး။
ငှားရမ်းခ: နှစ်စဉ်ငှားရမ်းခ။ အသေးစိတ်ကိုခေါ်ပါ
တိုက်ခန်းရောင်းမည်, တိုက်ခန်းရောင်းမည် District 8 Senopati, တောင်ပိုင်းဂျကာတာရှိတိုက်ခန်းများရောင်းခြင်း
အရောင်း District 8 Senopati တိုက်ခန်း ၁ BR Rp ။ ၄ ဘီလီယံအသက်သာဆုံး View Unblock!
တိုက်ခန်းအမည်: District 8
တည်နေရာ: Senopati Kebayoran Baru
တိုက်ခန်းအကျယ်အ ၀ န်း - 70 m2
SCBD Sudirman Jakarta အနီးရှိတိုက်ခန်းရောင်းမည်တိုက်ခန်းများရောင်းပါ Kebayoran Baru တောင်ပိုင်းဂျကာတာတိုက်ခန်းများရောင်းပါ Senopati တောင်ပိုင်းဂျကာတာSudirman Jakarta ရှိတိုက်ခန်းများရောင်းခြင်း
Ruko Piazza Mozia ငှားရန်ရှိသည် BSD သဘောတူညီချက်မကုန်မှီတိုင်အောင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်သည့်စီးတီး!
Shophouse တည်နေရာ: Piazza Mozia BSD ခံစားချက်တွေကို
မြေအရွယ်အစား: 54 m2
အဆောက်အ ဦး areaရိယာ: 165 m2
အပိုဆောင်းအချက်အလက်: အသစ်, ကောင်းသောအခြေအနေ
မဟာဗျူဟာကျသောတည်နေရာသည်စီးပွားရေးပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကဏ္ benefits အတော်များများမှစီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များရှိသည်။
အိမ်ယာ - ဂရင်းနစ်ပန်းခြံ၊ ဗန်ယာပန်းခြံ၊ Eminent၊ မိုဇီယာ၊
ရုံးများ - Unilever ရုံးချုပ်၊ Kompas Gramedia၊ Astra International၊ Wisma BCA, Foresta Business Loft
ပညာရေး - Prasetya Mulya တက္ကသိုလ်၊ ဆွစ်ဂျာမန်တက္ကသိုလ်၊ Atma Jaya တက္ကသိုလ်စသဖြင့်
စီးပွားဖြစ် / လူနေမှုပုံစံစတဲ့: AEON Mall, Breeze, Q Big Mall, ခေတ်သစ်စျေးကွက် ၂ BSD စီးတီး, ICE BSD ခံစားချက်တွေကို
စားသောက်ဆိုင်၊ စာရေးကိရိယာဆိုင်၊ အဝတ်လျှော်ခန်း၊ ရုံးခန်း၊ စျေးကွက်အသေးစား၊ ဆရာဝန်၏ရုံးခန်း၊ အလှပြင်ဆိုင်၊
ငှားရမ်းခ - IDR ၁၄၀,၀၀၀,၀၀၀ / နှစ်
Serpong ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင် Tangerang
ရုံးခန်းရောင်းရန် District 8, တောင်ပိုင်းဂျကာတာရုံးခန်းရောင်းခြင်း
စျေးအသက်သာဆုံး! ရုံးခန်းရောင်းရန် District 8 SCBD Sudirman တောင်ပိုင်းဂျကာတာ - ၁၃၃ m133 အမြတ်အစွန်းစစ်တမ်း 2
ရုံးအဆောက်အ ဦး အမည်: ဘဏ္/ာရေး / ကြွယ်ဝသောမျှော်စင်
အဆောက်အ ဦး တည်နေရာ: District 8 အများကြီး 28 SCBD Sudirman
Tower / Lantai / View: Treasury Prosperity Tower
ရုံးareaရိယာ - 133 m2
ASHTA MALL၊ SCBD နှင့်အလွန်လွယ်ကူစွာသွားနိုင်သည်
ကျယ်ဝန်းဇိမ်ခံ lob ည့်ခန်း
2 VIP ဓာတ်လှေကား, VIP ရေချိုးခန်း
Double-decker lift၊ ထူးဆန်းသည့်စနစ်၊ အမြန်ဆုံးနှင့်အလုံခြုံဆုံး
အရေးပေါ်ထွက်ပေါက် & မြေအောက်ခန်းယာဉ်ရပ်နား
၂၄ နာရီလုံခြုံရေး & CCTV
B1 B2 မှာမီးဖိုချောင် & Mushola
ရုံးခန်းSCရိယာ SCBD သည်ဂျကာတာတွင်နံပါတ်တစ်နေရာတွင်ရှိသည်
District 8 SCBD တွင်အကြီးဆုံး superblock ဖြစ်သည်
ဇိမ်ခံ Langham ဟိုတယ်နှင့်ဝိုင်းရံထားသည် Residence, အခွန်မျှော်စင်
Oakwood မှဝန်ဆောင်မှုပေးသောတိုက်ခန်း, District 8 တိုက်ခန်း - Infinity & Eternity Tower
ရုံးအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရယူပါ District 8 ရုံးခန်းနှင့်တိုက်ခန်းများမှာယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပ်ချိန်ရှိခြင်း၊
IDR ၅၂၀၀၀,၀၀၀ / စတုရန်းမီတာ
အငှားစျေး: IDR 250,000 / m2 ညှိနှိုင်းသည်အထိညှိနှိုင်း
SCBD Sudirman Jakarta အနီးတွင်ရုံးခန်းများရောင်းခြင်းမှာရုံးခန်းရောင်း Senopati တောင်ပိုင်းဂျကာတာSudirman Jakarta ရှိရုံးခန်းရောင်းရန်
တိုက်ခန်းရောင်းမည်, Bellagio တိုက်ခန်းရောင်းခြင်း Residence, တောင်ပိုင်းဂျကာတာရှိတိုက်ခန်းများရောင်းခြင်း
Bellagio တိုက်ခန်းရောင်းခြင်း Residences Kuningan South Jakarta -2BR ပရိဘောဂအရွယ်အစား 84 m2
တိုက်ခန်းအမည်: Bellagio Residences
တိုက်ခန်းအကျယ်အ ၀ န်း - 84 m2
ဖုန်းနံပါတ်: 0819831001 - အခြားမည်သည့်အရွယ်အစားနှင့်ကြမ်းပြင်အတွက်မဆိုကျွန်ုပ်ကို ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။
တိုက်ခန်းရောင်းမည်, တောင်ပိုင်းဂျကာတာရှိတိုက်ခန်းများရောင်းခြင်း, Lavie All Suites တိုက်ခန်းရောင်းမည်
Sell ​​Lavie Suites All Suites ကူမင်းတိုက်ခန်း၊ ဂျကာတာတောင်ပိုင်း - Tower Porte 2BR /2+ 1BR ပရိဘောဂများ
တိုက်ခန်းအမည်: Lavie အားလုံး Suites
တည်နေရာ: Jl ။ Denpasar Raya Kav ။ 5-7, ကြေးဝါ
အိပ်ခန်း: 2/2 + 1
နစ်မြုပ်နေသော Lounge၊ စာဖတ်ခန်း၊ Pre-function နှင့် function အခန်း၊ အားကစားခန်းမရေကန်၊ ကလေးရေကန်၊ ရေနွေးငွေ့ခန်း၊ ရေပူစမ်းနှင့်ကစားကွင်း၊ ပြင်ပကစားကွင်း၊ ရေကူးကန်၊ BBQ တဲ၊
Mezzanine: Floating Box Lounge၊ စီးပွားရေးစင်တာ
Sky အားကစားခန်းမများ၊ Sky အားကစားရုံ၊ Sky ရေကန်၊ အပူနှင့်အအေးခန်းရေကန်၊ Sauna
တိုက်ခန်းသည် Jl ။ Denpasar တွင်တည်ရှိပြီးဂျကာတာ၏အဓိကစီးပွားရေးခရိုင်၏အဓိကလမ်းများ (Jl ။ Sudirman, Jl ။ Gatot Subroto, Jl ။ MH) ကိုလျှင်မြန်။ လွယ်ကူစွာသွားနိုင်သည်။ Thamrin).
သာယာအဆင်ပြေမှုများ (ရုံးများ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ ဟိုတယ်များ၊ ဆေးရုံများနှင့်ကျောင်းများ) ဖြင့် ၀ န်းရံထားသည်။
အကောင်းဆုံးစျေး - တိုက်ခန်းငှားရန် Ciputra World ဂျကာတာတောင်ပိုင်း၊ ကူမင်းရှိ ၂ ခန်း - BR + သင်ခန်းစာ
ဇန်နဝါရီလ 24, 2021 admin မှတ်ချက် Leave
တည်နေရာ: Jl ။ ပါမောက္ခ Dr. Satrio Kav 11 တောင်ဂျကာတာ
တိုက်ခန်းအကျယ်အ ၀ န်း - ၃၅/၄၅ m104
အိပ်ခန်း:2BR + သင်ခန်းစာ
အခြေအနေ: ဒီယူနစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးရှိပရိဘောဂများနှင့်ခံစားချက်အလင်းရောင်။
ကန့်သတ်မဲ့ရေကူးကန်၊ တင်းနစ်ကွင်း၊ ကလေးတွေကစားကွင်း၊ အားကစားရုံ၊
ဂျကာတာ CBD ၏အလယ်ဗဟိုတွင်မဟာဗျူဟာကျသောတည်နေရာ။
အနီးတစ်ဝိုက်ရှိစျေးဝယ်စင်တာများ - ပလာဇာ Semanggi, Mall သံအမတ်ကြီး, Lotte Avenue စျေးဝယ်စင်တာ, Kuningan City, Kota Kasablanka
Tokopedia မျှော်စင်၊ DBS တာဝါ၊ Sampoerna Strategic၊ Standard Chartered စသည့်အနီးအနားရှိရုံးခန်းများသို့လမ်းလျှောက်နိုင်သောအကွာအဝေး
Golden Triangle ၏ Mega Kuningan ၏ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည်
Lotte Shopping Avenue Mall၊ ITC Kuningan၊ Mall Ambassador နှင့်အလွန်နီးကပ်စွာ (လမ်းလျှောက်နိုင်သောအကွာအဝေး), Kuningan City နှင့်ပလာဇာ Semanggi
Office Tokopedia မျှော်စင်ဘေးတွင်
DBS Tower ရုံး၊ Standard Chartered၊ Sampoerna Strategic Square၊ Mega Kuningan toရိယာနှင့်လမ်းလျှောက်ရန်အကွာအဝေးရှိသည်
Jalan Jenderal Sudirman၊ Jalan Gatot Subroto၊ Setiabudi ဒေသနှင့် HR Rasuna Said toရိယာသို့လွယ်ကူစွာသွားနိုင်သည်။
1 BR = $ 1,000 - $ 1,150 / လ
2 BR = $ 1,350 - $ 1,750 / လ
3 BR = $ 2,200 - $ 2,500 / လ
ဂျကာတာတောင်ပိုင်း၊ Mega Kuningan တွင်တိုက်ခန်းများရောင်းခြင်းဂျကာတာတောင်ပိုင်း၊ Satrio တွင်တိုက်ခန်းများရောင်းရန်
12... 279 နောက်တစ်ခု→
ကြော်ငြာအမျိုးအစား Category ေရြးပါအိမ်ခြံမြေရောင်းရန် တိုက်ခန်းရောင်းမည် တိုက်ခန်းရောင်းမည် Bali Daivani တိုက်ခန်းရောင်းမည် Bali Nusa Dua ရှိ Lavaya တိုက်ခန်းရောင်းမည် Bali Bandung တိုက်ခန်းရောင်းရန် ရောင်းရန် Dago Butik Bandung တိုက်ခန်း Gateway တိုက်ခန်းရောင်းရန် Ahmad Yani ဘန်ဒေါင်းမြို့ ရောင်းရန် Gateway Pasteur Bandung တိုက်ခန်း ရောင်းရန် Grand Asia Afrika Bandung Bandung ရှိ Jarrdin Cihampelas တိုက်ခန်းရောင်းမည် Parahyangan တိုက်ခန်းရောင်းမည် Residence တိုက်ခန်းရောင်းမည် Tamansari Tera Bandung ရောင်းရန် The Suites Metro Bandung တိုက်ခန်း တိုက်ခန်းရောင်းမည် Bekasi တိုက်ခန်းရောင်းမည် Azalea Suites Cikarang တိုက်ခန်းရောင်းမည် Center Point Bekasi အရှေ့အစိမ်းရောင်တိုက်ခန်းရောင်းမည် Bekasi - LRT City တိုက်ခန်းရောင်းမည် Gateway Park - LRT City Jati Cempaka Grand Dhika City တိုက်ခန်းရောင်းမည် ရောင်းရန် Grand Kamala Lagoon တိုက်ခန်း ရောင်းရန် Lagoon Betos တိုက်ခန်း တိုက်ခန်းရောင်းမည် LRT City Bekasi စိမ်းလန်းရိပ်သာလမ်း တိုက်ခန်းရောင်းမည် Meikarta Cikarang မွန်ရိုးတာဝါ Jababeka တိုက်ခန်းရောင်းမည် Oasis တိုက်ခန်းရောင်းခြင်း Cikarang တိုက်ခန်းရောင်းမည် Patraland Urbano Bekasi ရောင်းရန်ရှိသည် Springlake Summarecon တိုက်ခန်း Bekasi Trivium Terrace တိုက်ခန်းရောင်းမည် Cikarang Vasanta Innopark တိုက်ခန်းများရောင်းပါ Bogor တိုက်ခန်းရောင်းရန် Sentul တာဝါတိုက်ခန်းရောင်းမည် ရောင်းရန် Suwardana Park Bogor တိုက်ခန်း, တိုက်ခန်းရောင်းမည် Cikarang Metropark ကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်းရောင်းမည် တိုက်ခန်းရောင်းမည် Depok ရောင်းရန် Cinere Bellevue Suites တိုက်ခန်း ရောင်းရန် Cinere Resort တိုက်ခန်း Dave တိုက်ခန်းတိုက်ခန်းရောင်းမည် Depok Evenciio Margonda တိုက်ခန်းများရောင်းပါ Margonda တိုက်ခန်းရောင်းမည် Residence2Margonda တိုက်ခန်းရောင်းမည် Residence3Margonda တိုက်ခန်းရောင်းမည် Residence5Margonda တိုက်ခန်းရောင်းမည် Residence Depok ရောင်းရန် Podomoro Golf View တိုက်ခန်း Taman Melati Margonda တိုက်ခန်းရောင်းမည် တိုက်ခန်းရောင်းမည် Transpark Cibubur အနောက်ဂျာကာတာတိုက်ခန်းရောင်းမည် Belmont တိုက်ခန်းရောင်း Residence တိုက်ခန်းရောင်းမည် Central Park Residences Ciputra အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတိုက်ခန်းရောင်းရန် Citra နေထိုင်ရန်တိုက်ခန်းရောင်းမည် ရောင်းရန် City Park, Cengkareng တိုက်ခန်း Grand Madison ကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်းရောင်းမည် ရောင်းရန် Kedoya Elok တိုက်ခန်း Lucky Tower တိုက်ခန်းရောင်းရန် Residence Madison ပန်းခြံတိုက်ခန်းရောင်း မက္ကနာတိုက်ခန်းရောင်းမည် Residence Kebon Jeruk တိုက်ခန်းရောင်းမည် Mediterania Gajah Mada တိုက်ခန်းရောင်းမည် Mediterania Garden Residences 1 တိုက်ခန်းရောင်းမည် Mediterania Garden Residences2Neo Soho တိုက်ခန်းရောင်းမည် Central Park Palm Mansion တိုက်ခန်းရောင်းမည် ရောင်းရန် Paradise Mansion တိုက်ခန်း၊ Executive Permata တိုက်ခန်းများရောင်း ရောင်းရန် Puri Mansion တိုက်ခန်း၊ ရောင်းရန် Puri Orchard တိုက်ခန်း Puri ပန်းခြံတိုက်ခန်းရောင်းရန် Residences တိုက်ခန်းရောင်းမည် Puri Park View Royal တိုက်ခန်းရောင်းဝယ်ရေး Mediterania Garden Residences တိုက်ခန်းရောင်းမည် Seasons City Sentraland Cengkareng တိုက်ခန်းရောင်းရန် တိုက်ခန်းရောင်းမည် St. Moritz ရောင်းရန် Taman Anggrek ကွန်ဒို တိုက်ခန်းရောင်းမည် Taman Anggrek Residences ရောင်းရန် The Nest Puri Apartment ဝမ်၏တိုက်ခန်းကိုရောင်း Residence Wesling Kedoya တိုက်ခန်းရောင်းမည် West Vista Puri တိုက်ခန်းရောင်းမည် တိုက်ခန်းရောင်းမည် Westmark ရောင်းရန်ရှိသော Central Jakarta Apartments Anandamaya တိုက်ခန်းရောင်းမည် Residences Batavia တိုက်ခန်းရောင်းရန် တိုက်ခန်းရောင်းမည် Capitol Park Residence Casa Domaine တိုက်ခန်းရောင်းမည် ရောင်းရန် Sudirman Citylofts တိုက်ခန်း၊ ရောင်းရန် Cosmo Terrace တိုက်ခန်း ငါးဆယ်ခုနှစ်ရထားလမ်းတိုက်ခန်းရောင်းမည် တိုက်ခန်းရောင်းမည် Green Pramuka City ဂျကာတာရှိတိုက်ခန်းများရောင်းခြင်း Residence Kempinski တိုက်ခန်းရောင်းမည် Residence အင်ဒိုနီးရှား Mediterania Boulevard တိုက်ခန်းကိုရောင်းပါ Residences Kemayoran Mediterania နန်းတော် Kemayoran တိုက်ခန်းများရောင်းပါ Menteng အမှုဆောင်တိုက်ခန်းရောင်းမည် ရောင်းရန် Menteng Park Cikini တိုက်ခန်း Menteng ရင်ပြင်တိုက်ခန်းရောင်း မက်ထရိုပန်းခြံတိုက်ခန်းရောင်း Residence ရောင်းရန် Pakubuwono Menteng တိုက်ခန်း တိုက်ခန်းရောင်းမည် Pasar Baru Mansion ရောင်းရန် Pavilion Sudirman တိုက်ခန်း Permata Senayan တိုက်ခန်းရောင်းမည် ရောင်းရန် Sahid Sudirman တိုက်ခန်း Residence ရောင်းရန် Sudirman Hill တိုက်ခန်း Residence ရောင်းရန် Sudirman Park တိုက်ခန်း ရောင်းရန် Sudirman Suites Jakarta တိုက်ခန်း တိုက်ခန်းရောင်းမည် Thamrin အုပ်ချုပ်ရေး Residences တိုက်ခန်းရောင်းမည် Thamrin Residences ရောင်းရန် Boulevard Tanah Abang တိုက်ခန်း ရောင်းရန် The Mansion Kemayoran တိုက်ခန်း တောင်ပိုင်းဂျကာတာရှိတိုက်ခန်းများရောင်းခြင်း ရောင်းရန် 1 Park Avenue Gandaria တိုက်ခန်း ရောင်းရန် 1 ပန်းခြံတိုက်ခန်း Residence ဂန္ဒီးယား ရောင်းရန် Airlangga Ritz Carlton တိုက်ခန်း၊ သံတမန်တိုက်ခန်းရောင်း Residences Apple တိုက်ခန်းများရောင်း Residence ရောင်းရန် Aston Rasuna Kuningan တိုက်ခန်း Bellagio Mansion တိုက်ခန်းရောင်းရန် Bellagio တိုက်ခန်းရောင်းခြင်း Residence Bellevue နေရာတိုက်ခန်းရောင်းမည် တိုက်ခန်း Bellezza ရောင်း Permata Hijau ရောင်းရန် Bintaro Park View တိုက်ခန်း Botanica Simprug တိုက်ခန်းများရောင်းပါ ရောင်းရန် Branz Mega Kuningan တိုက်ခန်း Branz တိုက်ခန်းရောင်းမည် Simatupang မြို့တော်တိုက်ခန်းရောင်းရန် Residence တိုက်ခန်းရောင်းမည် Casa Grande Residence တိုက်ခန်းရောင်းမည် Casa Grande Residence အဆင့်2ရောင်းရန် Casablanca Mansion တိုက်ခန်း Cervino ကျေးရွာတိုက်ခန်းရောင်းမည် တိုက်ခန်းရောင်းမည် Ciputra World ၂ ဂျကာတာ Denpasar တိုက်ခန်းများရောင်း Residence Kuningan City Dharmawangsa တိုက်ခန်းရောင်းမည် Residence တိုက်ခန်းရောင်းမည် District 8 Senopati Darmawangsa Essence တိုက်ခန်းရောင်းမည် တိုက်ခန်းရောင်းမည် Gandaria Heights ရောင်းရန် Gardenia Boulevard တိုက်ခန်း၊ Grand ITC တိုက်ခန်းရောင်းမည် Permata Hijau တိုက်ခန်းရောင်းမည် Green Palace Kalibata City Green View တိုက်ခန်းရောင်းရန် Pondok Indah တိုက်ခန်းရောင်းမည် Hamptons Park ရောင်းရန် Izzara တိုက်ခန်း Simatupang တိုက်ခန်းရောင်းမည် Kalibata City Kebagusan City ရောင်းရန်တိုက်ခန်း ရောင်းမည် Kemang Mansion တိုက်ခန်း တိုက်ခန်းရောင်းမည် Kemang Village တိုက်ခန်းရောင်းမည် Kuningan Place ရောင်းရန် Kusuma Chandra တိုက်ခန်း ရောင်းရန် L'Avenue တိုက်ခန်း Pancoran ရောင်းရန် La Maison Barito တိုက်ခန်း၊ Lavande တိုက်ခန်းရောင်းရန် Residences Lavie All Suites တိုက်ခန်းရောင်းမည် Lexington တိုက်ခန်းရောင်းမည် Residence တိုက်ခန်းရောင်းမည် Marbella Kemang MyHome တိုက်ခန်းရောင်းရန် Ciputra World ဂျကာတာ 1 တိုက်ခန်းရောင်းမည် Nine Residence Nirvana တိုက်ခန်းရောင်း Residence Kemang ရောင်းရန် Oakwood Premier Cozmo တိုက်ခန်းများ Pacific Place တိုက်ခန်းရောင်းရန် Residence တိုက်ခန်းရောင်းမည် Pakubuwono House Pakubuwono တိုက်ခန်းရောင်းမည် Residence တိုက်ခန်းရောင်းမည် Pakubuwono Signature တိုက်ခန်းရောင်းမည် Pakubuwono Spring Pakubuwono Terrace တိုက်ခန်းကိုရောင်းပါ တိုက်ခန်းရောင်းမည် Pakubuwono View ရောင်းရန် Pancoran Riverside တိုက်ခန်း၊ ရောင်းရန် Pejaten Park Apartments Residence တိုက်ခန်းရောင်းမည် Permata Hijau တိုက်ခန်းရောင်းမည် Permata Hijau အစုံ တိုက်ခန်းရောင်းမည် Pondok Indah Residences ရောင်းရန် Prasada Mahata Tanjung Barat တိုက်ခန်း Puri Casablanca တိုက်ခန်းရောင်းမည် တိုက်ခန်းရောင်းမည် Puri Imperium တိုက်ခန်းရောင်းမည် Residence 8 Senopati တော်ဝင်သံလွင်တိုက်ခန်းရောင်းမည် Residence Sailendra တိုက်ခန်းရောင်းဝယ်ရေး Senayan တိုက်ခန်းရောင်းမည် Residence တိုက်ခန်းရောင်းမည် Senopati အစုံ Setiabudi တိုက်ခန်းရောင်းမည် Residences ရောင်းရန် Setiabudi Sky Garden တိုက်ခန်း တိုက်ခန်းရောင်းမည် Simprug Terrace SOHO Pancoran တိုက်ခန်းကိုရောင်းပါ တိုက်ခန်းရောင်းမည် Somerset Berlian ရောင်းရန် Somerset Grand Citra Kuningan တိုက်ခန်း တိုက်ခန်းရောင်းမည် South Hills ရောင်းရန် Sudirman Mansion တိုက်ခန်း ရောင်းရန် Sudirman Tower ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း တိုက်ခန်းရောင်းမည် Taman Rasuna တိုက်ခန်းရောင်းမည် Tamansari Semanggi တိုက်ခန်းရောင်းမည် Tamansari ဆွ The Elements Kuningan တိုက်ခန်းရောင်းရန် ရောင်းရန် The Empyreal Rasuna Epicentrum တိုက်ခန်း ရောင်းရန်ရှိသော Grove Kuningan တိုက်ခန်း ရောင်းရန် The Loggia တိုက်ခန်း ရောင်းရန်ရှိသော Peak Sudirman တိုက်ခန်း ရောင်းရန် Premiere MTH တိုက်ခန်း - \_ t LRT City ရောင်းရန် The Wave Rasuna တိုက်ခန်း တိုက်ခန်းရောင်းမည် Verde Residence တိုက်ခန်းရောင်းမည် Verde Two Residence Woodland ပန်းခြံတိုက်ခန်းရောင်းရန် Residence အရှေ့ဂျာကာတာတိုက်ခန်းရောင်း ၀ ယ်ခြင်း တိုက်ခန်းရောင်းမည် Bassura City Callia Pulomas တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည် ရောင်းရန်ရှိသော Casablanca အရှေ့တိုက်ခန်း Residences Gading Icon တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည် ရောင်းရန် Menara Cawang တိုက်ခန်း MT Haryono တိုက်ခန်းရောင်းရန် Residence ရောင်းရန် Sentra Timur တိုက်ခန်း Residence Signature ပန်းခြံတိုက်ခန်းရောင်းရန် Signature ပန်းခြံ Grande တိုက်ခန်းရောင်းမည် တိုက်ခန်းရောင်းမည် Tamansari အုံ ရောင်းရန်တိုက်ခန်း The H Residence Tifolia Pulomas တိုက်ခန်းရောင်းမည် မြို့ပြလက်မှတ်ရောင်းရန်တိုက်ခန်း - LRT City Ciracas မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည် Ancol Mansion တိုက်ခန်းရောင်းရန် ရောင်းရန် Aston Marina Ancol တိုက်ခန်း ရောင်းမည် City Home MOI တိုက်ခန်း ပြင်သစ် Walk MOI တိုက်ခန်းရောင်းမည် Gading Mediterania တိုက်ခန်း Residences ရောင်းရန် Gading Nias တိုက်ခန်း Residence Gading River View တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည် Gold Coast PIK တိုက်ခန်းရောင်းဝယ်ရေး Green Bay တိုက်ခန်းရောင်းရန် Pluit Green Lake Sunter တိုက်ခန်းရောင်းရန် တိုက်ခန်းရောင်းမည် Kelapa Gading ရင်ပြင် မေပယ်ပန်းခြံတိုက်ခန်းရောင်းရန် Mediterania Marina တိုက်ခန်းများရောင်းပါ Residence Ancol ရောင်းရန် Northland Ancol တိုက်ခန်း Residence Paladian ပန်းခြံတိုက်ခန်းရောင်း Regatta တိုက်ခန်းများရောင်းမည် ရောင်းရန် Riverside မှတိုက်ခန်း Pluit Sunter Park View တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည် ရောင်းမည် The Royale Springhill Apartment Residence Jogja တိုက်ခန်းရောင်းခြင်း Taman Melati Jogja တိုက်ခန်းရောင်းမည် Karawang တိုက်ခန်းရောင်းရန် တိုက်ခန်းရောင်းမည် Tamansari Mahogany Karawang တိုက်ခန်းရောင်းမည် Solo တိုက်ခန်းရောင်းမည် Solo Paragon တိုက်ခန်းရောင်းမည်medang Easton Park တိုက်ခန်းရောင်းရန် Residences ကျောက်စိမ်း တိုက်ခန်းရောင်းမည် Surabaya တိုက်ခန်းရောင်းမည် Bale Hinggil Surabaya ရောင်းရန်ရှိသော Gunawangsa Manyar တိုက်ခန်း Surabaya Puncak Kertajaya တိုက်ခန်းရောင်းမည် Surabaya Waterplace တိုက်ခန်းရောင်း Residence Surabaya တိုက်ခန်းရောင်းမည် Tangerang Aeropolis တိုက်ခန်းရောင်း Tangerang ရောင်းရန်ရှိသော Asatti Vanya Park တိုက်ခန်း BSD တိုက်ခန်းခ Residence BSD City Serpong လေဆိပ်စီးတီးတိုက်ခန်းရောင်းဝယ်ရေး Branz တိုက်ခန်းရောင်းမည် BSD ခံစားချက်တွေကို ဘရွတ်ကလင်တိုက်ခန်းရောင်း Alam Sutera Casa က de Parco တိုက်ခန်းရောင်းမည် BSD မြွေ Elevee တိုက်ခန်းရောင်းရန် Alam Sutera Ayodhya City တိုက်ခန်းရောင်းရန် Marigold NavaPark တိုက်ခန်းကိုရောင်းပါ BSD ရောင်းမည် Millenium Village တိုက်ခန်း Karawaci Modernland ဂေါက်ကွင်းတိုက်ခန်းရောင်းမည် Tangerang ပစိဖိတ်ဥယျာဉ်တိုက်ခန်းရောင်း Alam Sutera Paddington Heights တိုက်ခန်းရောင်းမည် Alam Sutera Paragon ကျေးရွာတိုက်ခန်းရောင်းမည် Rainbow Springs CondoVillas တိုက်ခန်းရောင်းမည် Saveria တိုက်ခန်းရောင်းခြင်း BSD ခံစားချက်တွေကို Scientia တိုက်ခန်းရောင်း Residence Gading Serpong ရောင်းရန် Serpong M-Town တိုက်ခန်း Residence ရောင်းရန် Serpong M-Town Signature တိုက်ခန်း ရောင်းရန် Serpong Town Square တိုက်ခန်း ရောင်းရန် Silkwood တိုက်ခန်းရောင်းမည် Residences Tangcity စကင်ဒီနေးဗီးယားရောင်းရန်တိုက်ခန်း Sky House တိုက်ခန်းရောင်းရန် BSD ရောင်းရန် Skyline Gading Serpong တိုက်ခန်း Skylounge တိုက်ခန်းရောင်း Tamansari Springwood တိုက်ခန်းရောင်းခြင်း Residence တိုက်ခန်းရောင်းမည် Tree Park City Cikokol ရောင်းရန်တိုက်ခန်း ဦး Residence Karawaci ရောင်းရန် Victoria Square Cimone တိုက်ခန်း တိုက်ခန်းရောင်းမည် Tangerang Selatan Akasa စင်ကြယ်သောတိုက်ခန်းရောင်းမည် BSD ရောင်းရန် Baileys City Ciputat တိုက်ခန်း ရောင်းရန် Bintaro Icon တိုက်ခန်း တိုက်ခန်းရောင်းမည် Bintaro Plaza Residences City Light Ciputat တိုက်ခန်းရောင်းမည် တိုက်ခန်းရောင်းမည် Emerald Bintaro ရောင်းရန် Green Lake View Ciputat တိုက်ခန်း ရောင်းရန် Parkland Avenue Serpong တိုက်ခန်း ရောင်းရန် Roseville SOHO & Suites တိုက်ခန်း ရောင်းရန် Serpong Greenview တိုက်ခန်းရောင်းမည် BSD ရောင်းရန် Silk Town Graha Raya တိုက်ခန်း Sky View တိုက်ခန်းရောင်းမည် BSD ရောင်းရန် Accent Bintaro တိုက်ခန်း စမ်းချောင်းတိုက်ခန်းရောင်းရန် Residences Ciputat သစ်ပင်ပန်းခြံတိုက်ခန်းရောင်းရန် BSD Yukata Suites တိုက်ခန်းရောင်းရန် အဆောက်အ ဦး ရောင်း ဂိုဒေါင်ရောင်းချခြင်း အနောက်ဂျာဗားဂိုဒေါင်ကိုရောင်းပါ ဂိုဒေါင်ရောင်းချခြင်း Bekasi Sukabumi ဂိုဒေါင်ရောင်းချခြင်း Pontianak ဂိုဒေါင်ရောင်းခြင်း ရုံးခန်းရောင်းရန် အနောက်ဂျကာတာရှိရုံးခန်းရောင်းရန် ဂျကာတာရှိဗဟိုရုံးကိုရောင်းခြင်း Sahid Sudirman စင်တာရုံးကိုရောင်းပါ တောင်ပိုင်းဂျကာတာရုံးခန်းရောင်းခြင်း ရုံးခန်းရောင်းရန် District 8 Gran Rubina ရုံးကိုရောင်း SOHO Pancoran ရုံးကိုရောင်းပါ Kiosk ရောင်း Kiosk ရောင်း Depok အနောက်ဂျာကာတာ Kiosk ရောင်း Kiosk တောင်ပိုင်းဂျကာတာကိုရောင်း Ruko ရောင်းချခြင်း Ruko ရောင်းချခြင်း Bekasi Ruko အနောက်ဂျကာတာကိုရောင်းချခြင်း Ruko အနောက်ဂျာဗားကိုရောင်း Ruko Bandung ရောင်းချခြင်း Ruko ဗဟိုဂျာဗားရောင်းချခြင်း Ruko Semarang ရောင်း Ruko အရှေ့ဂျာဗားကိုရောင်း Ruko Pontianak ကိုရောင်း Ruko ရောင်းချခြင်း Tangerang Ruko ရောင်းချခြင်း Tangerang Selatan အိမ်တလုံးရောင်းမည် Rumah Ambon ကိုရောင်းချခြင်း အိမ်တလုံးရောင်းမည် Bali အိမ်တလုံးရောင်းမည် Balikpapan အိမ်များရောင်းရန် Bandung အိမ်တလုံးရောင်းမည် Bekasi လုံးချင်းအိမ် Bogor ရောင်းမည် အိမ်တလုံးရောင်းမည် Depok အိမ်များရောင်းရန်ဂျကာတာ အိမ်ရောင်းရန် Jakarta Barat ဂျကာတာအလယ်ပိုင်းတွင်အိမ်များရောင်းခြင်း တောင်ပိုင်းဂျကာတာတွင်အိမ်တစ်အိမ်ရောင်းချခြင်း အရှေ့ဂျာကာတာအတွက်အိမ်များရောင်းခြင်း ဂျကာတာမြောက်ပိုင်းတွင်အိမ်များရောင်းခြင်း အနောက်ဂျာဗားရှိအိမ်တစ်လုံးကိုရောင်းချခြင်း Cianjur အိမ်ရောင်း မြန်မာအိမ်ရောင်းခြင်း အိမ်ရောင်းရန် အနောက်ဂျာဗား၊ ကူနန်အိမ်ရောင်းခြင်း Sukabumi အိမ်ရောင်းရန် အလယ်ပိုင်းဂျာဗားအတွက်အိမ်များရောင်းချခြင်း သန့်ရှင်းသောအိမ်ရောင်း အဆိုပါ Tegal အိမ်ရောင်း အရှေ့ဂျာဗားအတွက်အိမ်များရောင်းချခြင်း Gresik အိမ်ရောင်းမည် Rumah Jombang ကိုရောင်းသည် Rumah Sidoarjo ကိုရောင်း အိမ်တလုံးရောင်းမည် Surabaya Jogja အိမ်များကိုရောင်းခြင်း အိမ်တလုံးရောင်းမည် Sleman Yogyakarta အိမ် Makassar ရောင်းမည် Rumah Padang ကိုရောင်း Pontianak အိမ်ရောင်းမည် Semarang အိမ်များကိုရောင်းသည် တောင်ပိုင်းဆူမာတြားအတွက်အိမ်များရောင်းခြင်း အိမ်ရောင်းမည် အိမ်တလုံးရောင်းမည် Tangerang အိမ်တလုံးရောင်းမည် Tangerang Selatan ဘော်ဒါအိမ်များကိုရောင်းခြင်း မြေရောင်းမည် ခြံမြေရောင်းစားသည် Banten မြေရောင်းခြင်း Tanah Cilegon ရောင်း မြေရောင်းမည် Bekasi ဂျကာတာမြေရောင်းခြင်း အနောက်ဂျကာတာမြေရောင်းခြင်း တောင်ပိုင်းဂျကာတာမြေရောင်းခြင်း အနောက်ဂျာဗားမြေရောင်းခြင်း Bogor မြေရောင်းခြင်း Sukabumi မြေရောင်းခြင်း အလယ်ပိုင်းဂျာဗားမြေရောင်းခြင်း Semarang မြေရောင်းခြင်း မြေရောင်းမည် Solo အရှေ့ဂျာဗားမြေရောင်းခြင်း မြေရောင်းမည် Pasuruan မြေရောင်းမည် Surabaya Jogja မြေရောင်းခြင်း အနောက် Kalimantan မြေရောင်းခြင်း Pontianak မြေရောင်းခြင်း တောင်ပိုင်း Sulawesi မြေရောင်း မြောက်ဆူမားတြားမြေရောင်းခြင်း မြေရောင်းမည် Tangerang မြေရောင်းမည် Tangerang Selatan ဗီလာရောင်းပါ ဗီလာရောင်းပါ Baliငှားရန်အိမ်ခြံမြေ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Bandung တိုက်ခန်းအငှား Art Deco၊ ဇိမ်ခံတိုက်ခန်းငှားမည် ငှားရန်ရှိသော Beverly Dago တိုက်ခန်း Residence ငှားရန်ရှိသောတိုက်ခန်း ငှားရန် Galeri Ciumbuleuit တိုက်ခန်း2Gateway တိုက်ခန်းငှားရမ်းခြင်း Ahmad Yani ဘန်ဒေါင်းမြို့ Gateway Pasteur Bandung တိုက်ခန်း Grand Asia Afrika Bandung တွင်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် Jarrdin Cihampelas တိုက်ခန်းသည်ငှားရန်ရှိသည် ငှားရန် Majesty Bandung တိုက်ခန်း ပါရမီရိပ်သာတိုက်ခန်းအငှား Residences တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Tamansari La Grande Bandung ငှားရန်တိုက်ခန်း The Suites Metro Bandung တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Bekasi တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Azalea Suites Cikarang တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Center Point Bekasi ငှားရန်ရှိသောအရှေ့ဘက်အစိမ်းရောင်တိုက်ခန်း Bekasi - LRT City Enviro တိုက်ခန်းငှားရမ်းပါ Cikarang Grand Dhika City တိုက်ခန်းကိုငှားရန် Grand Icon Caman တိုက်ခန်းအငှား Jatibening Grand Kamala ရှိငှားမည့်တိုက်ခန်း ငှားရန်ရှိသော Lagoon Betos တိုက်ခန်း Mont Blanc တိုက်ခန်းအငှား Bekasi Oasis တိုက်ခန်းငှားရမ်းခြင်း Cikarang Orange County တိုက်ခန်းငှားရမ်းခြင်း Cikarang Riverview တိုက်ခန်းငှားရမ်းပါ Residence Jababeka ငှားရန် The Springlake Summarecon တိုက်ခန်း Bekasi Trivium Terrace တိုက်ခန်းကိုငှားပါ Cikarang Bogor တိုက်ခန်းအငှား ငှားရန်ရှိသော Bogor Valley တိုက်ခန်း Residence ငှားရန်ရှိသော Dramaga Tower, Bogor တိုက်ခန်း Sentul Tower တိုက်ခန်းအငှား တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Cikarang Metropark ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းငှားရန် တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Depok Cinere Bellevue Suites တိုက်ခန်းကိုငှားပါ Cinere Resort တိုက်ခန်းငှားပါ Dave တိုက်ခန်းတိုက်ခန်းကိုငှားပါ Depok Margonda တိုက်ခန်းငှားရမ်းပါ Residence2Margonda တိုက်ခန်းငှားရမ်းပါ Residence3Margonda တိုက်ခန်းငှားရမ်းပါ Residence5Margonda တိုက်ခန်းငှားရမ်းပါ Residence Depok Podomoro ဂေါက်ကွင်းငှားရန်တိုက်ခန်း ငှားရန် Taman Melati Margonda တိုက်ခန်း၊ Jakarta Apartments ကိုငှားပါ အနောက်ဂျကာတာရှိတိုက်ခန်းအငှား Belmont တိုက်ခန်းငှားရမ်းပါ Residence တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Central Park Residences Ciputra အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတိုက်ခန်းကိုငှားပါ City Park Cengkareng တိုက်ခန်းအငှား Grand Madison ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းငှားရန် Grand Tropic Suites တိုက်ခန်းကိုငှားပါ Green Park View တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် Madison ပန်းခြံတိုက်ခန်းငှားရန် တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Mediterania Gajah Mada တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Mediterania Garden Residences 1 တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Mediterania Garden Residences2Menara Latumeten တွင်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် မက်ထရိုပန်းခြံတိုက်ခန်းငှားရန် Residence Neo Soho တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် Central Park Permata အမှုဆောင်တိုက်ခန်းငှားရမ်းခ Puri Mansion တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် ငှားရန်ရှိသော Puri Orchard တိုက်ခန်း Puri Park တိုက်ခန်းအငှား Residences တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Puri Park View Royal တိုက်ခန်းငှားရမ်းခြင်း Mediterania Garden Residences တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Seasons City Sentraland Cengkareng တွင်တိုက်ခန်းငှားရန် Sky Terrace Lagoon ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ St. Moritz Taman Anggrek ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းငှားရန် တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Taman Anggrek Residences The Nest Puri တိုက်ခန်းကိုငှားပါ West Vista Puri တိုက်ခန်းအငှား တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Westmark Windsor Puri တိုက်ခန်းအငှား ဂျာကာတာရှိတိုက်ခန်းအငှား ငှားရန်ရှိသောတိုက်ခန်း Residences Batavia တိုက်ခန်းငှားရမ်းခြင်း တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Capitol Park Residence Casa Domaine တိုက်ခန်းများကိုငှားပါ Citylofts Sudirman မှတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် Cosmo အိမ်ကြီးတိုက်ခန်းငှားမည် Cosmo ပန်းခြံတိုက်ခန်းငှားရန် Cosmo Terrace တိုက်ခန်းကိုငှားပါ GP Plaza Slipi ငှားရန်ရှိသည် တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Green Pramuka City ငှားရန် Istana Sahid တိုက်ခန်း Jakarta Apartments ကိုငှားပါ Residence Kempinski တိုက်ခန်းငှားရမ်း Residence အင်ဒိုနီးရှား Mediterania နန်းတော် Kemayoran ကိုငှားပါ Menteng Park Cikini တိုက်ခန်းအငှား Menteng ရင်ပြင်တိုက်ခန်းကိုငှားရန် တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Pasar Baru Mansion Pavilion Sudirman တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် ပါရမီ Senayan တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် Sahid Sudirman တိုက်ခန်းငှားရန် Residence တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Salemba Residence ငှားရန် Sudirman Hill တိုက်ခန်း Residence ငှားရန် Sudirman Park တိုက်ခန်း ငှားရ Sudirman Suites Jakarta တိုက်ခန်း တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Thamrin အုပ်ချုပ်ရေး Residences တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Thamrin Residences ငှားရန်ရှိသော Boulevard Tanah Abang တိုက်ခန်း ငှားရန် The Mansion Kemayoran တိုက်ခန်း တိုက်ခန်းဂျကာတာတွင်ငှားရန် တိုက်ခန်း ၁ ပန်းခြံရိပ်သာလမ်း၊ Airlangga Ritz Carlton တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် သံရုံးတိုက်ခန်းငှားရမ်းပါ Residences သံအမတ်ကြီးငှားရန်တိုက်ခန်း2Aston Rasuna Kuningan တိုက်ခန်းကိုငှားပါ Bellagio Mansion တိုက်ခန်းကိုငှားရမ်းပါ Bellagio တိုက်ခန်းများကိုငှားပါ Residence Bellezza တိုက်ခန်းအငှား Permata Hijau Bintaro Park View တိုက်ခန်းအားငှားရန် Bonavista Lebak Bulus တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် Botanica Simprug တိုက်ခန်းငှားရန် Branz တိုက်ခန်းငှားမည် Simatupang မြို့တော်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Residence တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Casa Grande Residence တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Casa Grande Residence အဆင့်2ငှားရန် Casablanca Mansion တိုက်ခန်း Cervino ကျေးရွာတိုက်ခန်းအငှား တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Ciputra World ၂ ဂျကာတာ Denpasar တိုက်ခန်းများကိုငှားပါ Residence Kuningan City Dharmawangsa တိုက်ခန်းကိုငှားပါ Residence တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ District 8 Senopati Darmawangsa Essence တိုက်ခန်းအငှား ပန်းခြံတိုက်ခန်းငှားရမ်း လေးထပ်လေတိုက်ငှားရန်ရှိသည် တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Gandaria Heights Gardenia Boulevard တိုက်ခန်းကိုငှားပါ Gateway Pesanggrahan တိုက်ခန်းအငှား ငှားရန်ရှိသော Grand ITC တိုက်ခန်း Permata Hijau တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Green Palace Kalibata City တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Hamptons Park တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Kalibata City ငှားရန် Kebagusan City တိုက်ခန်း Pudjiadi Prestige မှ Kemang တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် ငှားရန်ရှိသောတိုက်ခန်း ငှားရန်ရှိသော Kemang Mansion တိုက်ခန်း တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Kemang Village တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Kuningan Place ငှားရန် L'Avenue Pancoran တိုက်ခန်း၊ La Maison Barito တိုက်ခန်းကိုငှားရန် Lavande တိုက်ခန်းဌားရန် Residences Lavie All Suites တိုက်ခန်းကိုငှားပါ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Marbella Kemang MyHome တိုက်ခန်းကိုငှားပါ Ciputra World ဂျကာတာ 1 Nifarro ပန်းခြံတိုက်ခန်းများကိုငှားပါ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Nine Residence ငှားရန် Oakwood Premier Cozmo တိုက်ခန်းများအတွက် Pacific Place တိုက်ခန်းအငှား Residence Pakubuwono တိုက်ခန်းအငှား Residence တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Pakubuwono Spring Pakubuwono Terrace ကိုငှားရန် တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Pakubuwono View Pancoran Riverside ရှိငှားမည့်တိုက်ခန်း ပုလဲဥယျာဉ်တိုက်ခန်းငှားရန် ငှားရန်ရှိသောတိုက်ခန်း Residence တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Pondok Indah Residences Puri Casablanca မှငှားရန်တိုက်ခန်း တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Raffles Residences ကူမင်း တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Residence 8 Senopati Royal သံလွင်တိုက်ခန်းငှားရန် Residence Sahid မြို့တော်တိုက်ခန်းကိုငှားပါ Residence Sailendra တိုက်ခန်းငှားရမ်းခြင်း တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Senayan City Residence Senayan တိုက်ခန်းများကိုငှားပါ Residence တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Senopati အစုံ Setiabudi တိုက်ခန်းကိုငှားပါ Residences Setiabudi Sky ဥယျာဉ်တိုက်ခန်းငှားရမ်းပါ SOHO Pancoran တိုက်ခန်းအငှား တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ South Hills ငှားရန် Sudirman Mansion တိုက်ခန်း၊ Sudirman Tower ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Taman Rasuna တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Tamansari Semanggi တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Tamansari ဆွ အဆိုပါ Aspen တိုက်ခန်းငှားပါ Residences ငှားရန်ရှိသော The Elements Kuningan တိုက်ခန်း ငှားရန် The Empyreal Rasuna Epicentrum တိုက်ခန်း ငှားရန်ရှိသည် Grove Kuningan တိုက်ခန်း ငှားရန်ရှိသော Peak Sudirman တိုက်ခန်း ငှားရန် The Wave Rasuna တိုက်ခန်း တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Verde Residence Woodland ပန်းခြံတိုက်ခန်းငှားရန် Residence အရှေ့ဂျာကာတာတွင်တိုက်ခန်းငှားမည် တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Bassura City Callia Pulomas တိုက်ခန်းအငှား Casablanca အရှေ့တိုက်ခန်းအငှား Residences Delta Cakung တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် East Park Cakung တိုက်ခန်းအငှား Gading Icon တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် ငှားရန်ရှိသော Patria Park Cawang Sentra Timur ငှားရန်တိုက်ခန်း Residence Signature ပန်းခြံတိုက်ခန်းငှားရန် Signature ပန်းခြံ Grande တိုက်ခန်းငှားရန် ငှားရန်တိုက်ခန်း The H Residence Oak Tower တိုက်ခန်းကိုငှားပါ ငှားရန် Tifolia Pulomas တိုက်ခန်း North Jakarta တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် ငှားရန်ရှိသော Ancol Mansion တိုက်ခန်း Aston တိုက်ခန်းငှားပါ Pluit ငှားရန်ရှိသောတိုက်ခန်း City Home MOI French Walk MOI တိုက်ခန်းကိုငှားပါ မြေညီထပ်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် Residences ငှားရန် Nias တိုက်ခန်း Residence ငှားရန်ရှိသော River View တိုက်ခန်းကိုငှားရန်ရှိသည် ငှားရန်ရှိသော Gold Coast PIK တိုက်ခန်း Green Bay တိုက်ခန်းအငှား Pluit Green Lake Sunter မှငှားရန်တိုက်ခန်း တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Kelapa Gading ရင်ပြင် မြေထဲပင်လယ် Marina တိုက်ခန်းငှားရမ်း Residence Ancol မက်ထရို Sunter တိုက်ခန်းငှားရမ်း Northland အငှား Residence Regatta တိုက်ခန်းငှားရန် Sunter Park View တိုက်ခန်းအငှား ငှားရန်ရှိသော The Kensington Royal Suites တိုက်ခန်း Royale Springhill တိုက်ခန်းကိုငှားပါ Residence Jogja တိုက်ခန်းများငှားပါ Neo + Awana တိုက်ခန်းများကိုငှားပါ Yogyakarta Jogja ကျောင်းသားရဲတိုက်တိုက်ခန်းအားငှားရန် Taman Melati Jogja တိုက်ခန်းငှားပါ Vivo Seturan Yogyakarta တိုက်ခန်းကိုငှားပါ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Surabaya တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Bale Hinggil Surabaya Gunawangsa Manyar တိုက်ခန်းငှားရန် Surabaya High Point တိုက်ခန်းငှားရမ်းပါ Surabaya ငှားရန်ရှိသော La Riz Mansion တိုက်ခန်း Surabaya တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ One Icon Residence Surabaya Orchard Mansion တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် Surabaya Waterplace တိုက်ခန်းငှားရမ်းပါ Residence Surabaya တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Tangerang ၁၉ ရိပ်သာလမ်းတွင်ငှားရန်ရှိသည် Tangerang Aeropolis တိုက်ခန်းငှားရန် Tangerang တိုက်ခန်းခငှားရမ်းပါ Residence BSD City Serpong Branz တိုက်ခန်းငှားမည် BSD ခံစားချက်တွေကို Casa de Parco တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် BSD မြွေ ငှားရန် EcoHome Citra Raya တိုက်ခန်းများ ငှားရန်ရှိသော Great Western Resort Serpong တိုက်ခန်း Ayodhya City တိုက်ခန်းအငှား Marigold NavaPark တိုက်ခန်းအငှား BSD Modernland ဂေါက်ကွင်းငှားရန်တိုက်ခန်း Tangerang Paddington Heights တိုက်ခန်းငှားရမ်းခြင်း Alam Sutera ငှားရန်ရှိသောတိုက်ခန်း 88 Saveria တိုက်ခန်းငှားရမ်းပါ BSD ခံစားချက်တွေကို Scientia တိုက်ခန်းငှားရမ်းပါ Residence Gading Serpong Serpong M-Town တိုက်ခန်းငှားရန် Residence ငှားရန်ရှိသော Serpong M-Town Signature တိုက်ခန်း Serpong မြို့ရင်ပြင်တိုက်ခန်းအငှား ပိုးထည်တိုက်ခန်းငှားရမ်းခြင်း Residences Tangcity စကင်ဒီနေးဗီးယားတိုက်ခန်းငှားရမ်းခြင်း Skyline Gading Serpong တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် Skylounge တိုက်ခန်းငှားရမ်းပါ Tamansari Springwood တိုက်ခန်းငှားရမ်းခြင်း Residence တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Tree Park City Cikokol တိုက်ခန်း U Residence Karawaci တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Tangerang Selatan Akasa စင်ကြယ်သောတိုက်ခန်းငှားရန် BSD Baileys City Ciputat တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် ငှားရန် Bintaro Icon တိုက်ခန်း တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Bintaro Plaza Residences ဘရွတ်ကလင်တိုက်ခန်းကိုငှားပါ Alam Sutera City Light Ciputat တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Emerald Bintaro Green Lake View Ciputat တိုက်ခန်းငှားရန် Parkland ရိပ်သာလမ်း Serpong တိုက်ခန်းကိုငှားရန် Roseville SOHO & Suites တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် Serpong Greenview တိုက်ခန်းငှားရန် BSD ငှားရန်ရှိသည် Silk Town Graha Raya တိုက်ခန်း Sky View တိုက်ခန်းငှားရမ်းပါ BSD Accent Bintaro တိုက်ခန်းကိုငှားပါ Tree Park တိုက်ခန်းငှားရမ်းပါ BSD Yukata Suites အငှား ဂိုဒေါင်ငှားရမ်းခြင်း အနောက်ဂျာဗားဂိုဒေါင်ငှားရမ်းခြင်း Sukabumi ဂိုဒေါင်ကိုငှားပါ Pontianak ဂိုဒေါင်ကိုငှားပါ ရုံးခန်းငှားရမ်းခြင်း Bandung ရုံးခန်းငှားရမ်းခြင်း အနောက်ဂျကာတာရုံးခန်းငှားရမ်းခြင်း ဂျကာတာရှိရုံးခန်းငှားရမ်းခြင်း Menara Batavia ရုံးငှားရမ်းခြင်း တောင်ပိုင်းဂျကာတာရုံးခန်းငှားရမ်းခြင်း မန်ဟက်တန်ရင်ပြင်ရုံးကိုငှားပါ အရှေ့ဂျာကာတာရုံးခန်းငှားရမ်းခြင်း Kiosk ငှားရမ်းခြင်း Kiosk ငှားရမ်းခြင်း Bekasi ဂျာကာတာအလယ်ပိုင်းရှိ Kiosk ငှားရမ်းခြင်း ဘော်ဒါဆောင်ကိုငှားပါ အရှေ့ဂျာကာတာရှိဘော်ဒါဆောင်ကိုငှားပါ ဆိုင်ငှားရမ်းပါ ဆိုင်ငှားရမ်းပါ Bekasi ဂျကာတာတောင်ပိုင်းရှိဆိုင်တစ်ခန်းကိုငှားပါ အနောက်ဂျာဗားတွင်ဆိုင်တစ်ခန်းငှားပါ Ruko Cirebon ကိုငှားပါ Pontianak Shophouse ကိုငှားပါ ဆိုင်ငှားရမ်းပါ Tangerang အိမ်တလုံးငှားပါ အိမ်ခြံမြေငှားရန် အိမ်တလုံးငှားပါ Bekasi Bogor တွင်အိမ်ငှားပါ အိမ်တလုံးငှားပါ Depok ဂျာကာတာအလယ်ပိုင်းတွင်အိမ်တစ်လုံးငှားပါ တောင်ပိုင်းဂျကာတာတွင်အိမ်တစ်လုံးငှားပါ အရှေ့ဂျာကာတာတွင်အိမ်တစ်လုံးငှားပါ အိမ်ယာတစ်လုံးငှားရန် အရှေ့ဂျာဗားတွင်အိမ်တစ်လုံးငှားပါ Sidoarjo တွင်အိမ်တစ်လုံးငှားပါ အိမ်တလုံးငှားပါ Surabaya Padang တွင်အိမ်တစ်လုံးငှားပါ အိမ်တလုံးငှားပါ Pekanbaru Pontianak တွင်အိမ်တစ်လုံးငှားပါ အိမ်တလုံးငှားပါ Tangerang အိမ်တလုံးငှားပါ Tangerang Selatan မြေငှားခ ငှားရန်ရှိသောမြေကွက် စီးပွားရေးရာငှားရမ်း ဂျာကာတာရှိစီးပွားရေးနေရာတစ်ခုငှားပါ စီးပွားရေးအချက်အချာနေရာတစ်ခုကိုတောင်ဂျကာတာတွင်ငှားပါ
မြေရောင်းမည် Tangerang Selatan
အလားအလာရှိသောစားသုံးသူပေါင်း ၂၀၀,၀၀၀ ကျော်သည်ထောက်ပံ့ကြေးရှိသောအိမ်များကိုတန်းစီကြသည်
Bundaran HI အနီးတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည် Mall အနီးရှိတိုက်ခန်းတစ်ခုရောင်းခြင်း Central Park ဂျကာတာမြို့ Grand Indonesia Mall အနီးရှိတိုက်ခန်းများရောင်းမည် SCBD Sudirman Jakarta အနီးရှိတိုက်ခန်းရောင်းမည် Wisma BNI 46 Jakarta အနီးတွင်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည် ဂျကာတာတောင်ပိုင်း၊ ကက်စဘလန်ကာတွင်တိုက်ခန်းများရောင်းသည် ဂျကာတာအလယ်ပိုင်းရှိ Cikini တွင်တိုက်ခန်းရောင်းရန် ဂျကာတာအနောက်ဘက်ရှိ Grogol ရှိတိုက်ခန်းများရောင်းပါ တိုက်ခန်းများရောင်းပါ Kalibata တောင်ပိုင်းဂျကာတာ တိုက်ခန်းများရောင်းပါ Kebayoran Lama တောင်ပိုင်းဂျကာတာ တိုက်ခန်းများရောင်းပါ Kelapa Gading ဂျကာတာမြောက်ပိုင်း တိုက်ခန်းများရောင်းချခြင်း တိုက်ခန်းများရောင်း ၀ ယ်ခြင်း ဂျကာတာတောင်ပိုင်း၊ Mega Kuningan တွင်တိုက်ခန်းများရောင်းခြင်း ဂျာကာတာအလယ်ပိုင်း၊ Menteng တွင်တိုက်ခန်းများရောင်းရန် တိုက်ခန်းများရောင်းပါ Pasar Minggu တောင်ပိုင်းဂျကာတာ တိုက်ခန်းများရောင်းပါ Pondok Indah တောင်ပိုင်းဂျကာတာ ဂျကာတာတောင်ပိုင်း၊ ရာဆာနာဆိတ်တွင်တိုက်ခန်းများရောင်းသည် ဂျကာတာတောင်ပိုင်း၊ Satrio တွင်တိုက်ခန်းများရောင်းရန် တိုက်ခန်းများရောင်းပါ Senopati တောင်ပိုင်းဂျကာတာ Sudirman Jakarta ရှိတိုက်ခန်းများရောင်းခြင်း ဂျကာတာအလယ်ပိုင်း၊ Tanah Abang တွင်တိုက်ခန်းများရောင်းရန် ဂျာကာတာအနောက်ပိုင်းရှိ Tanjung Duren တွင်တိုက်ခန်းများရောင်းခြင်း တိုက်ခန်းများရောင်းပါ Thamrin ဂျကာတာအလယ်ပိုင်း Bundaran HI အနီးတွင်တိုက်ခန်းငှားရန် Mall Grand Indonesia အနီးရှိတိုက်ခန်းများကိုငှားရန် SCBD Sudirman Jakarta အနီးရှိတိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Wisma BNI 46 ဂျာကာတာအနီးရှိတိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ ဂျကာတာတောင်ပိုင်းရှိ Antasari ရှိတိုက်ခန်းကိုငှားရန် ဂျာကာတာတောင်ပိုင်း၊ Casablanca တွင်တိုက်ခန်းငှားရန် ဂျာကာတာအလယ်ပိုင်းရှိ Cikini တွင်တိုက်ခန်းငှားရန် အရှေ့ဂျာကာတာရှိ Jatinegara တွင်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ အတွင်းတိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Kalibata တောင်ပိုင်းဂျကာတာ ဂျာကာတာတောင်ပိုင်း Karet Kuningan တွင်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ အတွင်းတိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Kebayoran Lama တောင်ပိုင်းဂျကာတာ အတွင်းတိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Kelapa Gading ဂျကာတာမြောက်ပိုင်း တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည် ဂျာကာတာအလယ်ပိုင်း၊ ကေယာရာရိပ်သာလမ်းတွင်ငှားရန်ရှိသည် တိုက်ခန်းငှားရန် အတွင်းတိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Pasar Minggu တောင်ပိုင်းဂျကာတာ အတွင်းတိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Permata Hijau တောင်ပိုင်းဂျကာတာ အတွင်းတိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Pluit ဂျကာတာမြောက်ပိုင်း တိုက်ခန်းများကိုငှားရမ်းပြီး Prakanca, South Jakarta Rasuna Epicentrum Kuningan တွင်တိုက်ခန်းငှားရန် ဂျာကာတာတောင်ပိုင်း၊ ရာဆာနာဆိတ်တွင်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ အတွင်းတိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Senopati တောင်ပိုင်းဂျကာတာ ဂျာကာတာတောင်ပိုင်း၊ Setiabudi တွင်တိုက်ခန်းငှားရန် Sudirman Jakarta ရှိတိုက်ခန်းကိုငှားရန် တာရာအဘန်တွင်ရှိသောတိုက်ခန်းငှားရန်၊ အတွင်းတိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားပါ Thamrin ဂျကာတာအလယ်ပိုင်း